Maninona ny Snapchat no manetsika ny marketing dizitaly | Martech Zone
Mahavariana ny isa. #Snapchat dia mirehareha maherin'ny 100 tapitrisa mpampiasa mavitrika isan'andro ary maherin'ny 10 lavitrisa horonan-tsary isan'andro, isaky ny angona anatiny. Ny tambajotra sosialy dia lasa mpilalao fototra amin'ny ho avy amin'ny marketing nomerika.
Hatramin'ny nanombohany ny taona 2011 ity ephemeral nitombo haingana ny tamba-jotra, indrindra eo amin'ireo taranaka nomerika misy an'ireo mpampiasa finday fotsiny. Sehatra haino aman-jery sosialy akaiky anao izy io ary misy ambaratongam-pitiavana mahaliana.
Snapchat no tamba-jotra izay itadiavan'ny marika ny mpampiasa handefasana hafatra manokana ary hiteny amin'ny kaody azony. Tambajotra iray nahatratra izay notadiavin'ny dokam-barotra nandritra ny 100 taona lasa: fifandraisana iray.
Ny fakana vaovao ny famokarana atiny misy sary na saripika horonan-tsary 10 segondra izay manjavona ao anatin'ny fe-potoana 24 ora dia nanova ny fomba fampiasantsika ny media sosialy sy ny fanavaozana ny fomba fijerintsika horonan-tsary - ankehitriny sy ny finday. Maneho fotoana lehibe ahazoana mpivarotra sy dokam-barotra. Manome toerana sarobidy hifandraisana sy hifandraisana amin'ny mpihaino anao amin'ny fomba manokana sy tena izy io.
Ny maha Snapchat anao dia tambajotra ankafizin'ny tanora, izy io ihany koa no toerana tokony hitrandrahana ny demografika Millennial tena notadiavina, sehatra iray izay miha sarotra ny mahita amin'ny fantsona hafa.
Androany, 63% amin'ireo mpampiasa #Snapchat dia eo anelanelan'ny 13 sy 24 taona, araka ny angona nomen'ny orinasa. Ary na dia mety tsy voatery manana kaonty amin'ny banky na carte de crédit azy manokana aza ireo mpampiasa tanora dia matetika ireo mamorona fironana, manapa-kevitra ny amin'ny fividianana ary mitaona ny fanapahan-kevitry ny ray aman-dreniny.
Fa maninona no ampidirina ao amin'ny tetikadin'ny varotrao ny Snapchat?
Mamorona fanentanana amin'ny marika: Snapchat dia fomba iray mahomby amin'ny fananganana fampahafantarana amin'ny orinasanao sy hampitana ny soatoavin'ny marika amin'ny alàlan'ny fitantarana tantara. Ataovy velona ny fanatrehanao ny marika ary omeo ny atiny ho an'ny mpihaino misy lanjany - sarimihetsika horonantsary azo zaraina mba hizarana fampianarana haingana sy / na torohevitra sy fampisehoana vokatra, ohatra.
Zahao ny maha-orinasa anao: Ny mangarahara dia lakilen'ny fifandraisana amin'ireo mpanjifanao amin'ny sehatra tena izy ary Snapchat no manome izany. Alefaso ao ambadiky ny sary ny sary avy amin'ny orinasanao ary asehoy ireo hetsika isan'andro tsy dia hitan'ny mpanjifa.
Manentana ny mpanjifa: Ampandraiso anjara ny mpanjifa ary ampirisiho izy ireo hanao zavatra. Manolora fandrakofana mivantana avy amin'ny iray amin'ireo hetsika nataonao, tsidiho mialoha ireo vokatra na serivisy ho avy ary manaova fanomezana sy fifaninanana.
Ahoana ny fomba hahatratrarana ireo influencer snapchat marina?
Ny fampielezana varotra Influencer dia mety handany fotoana be na inona na inona sehatra sosialy. Ny fampiasana tsena mpanentana dia lakilen'ny streamlining ny fizotrany handefasana atiny azo ovaina sy ROI matanjaka.
SocialPubli.com, ilay mitarika tsenan'ny fitarihana kolontsaina marobe, vao tsy ela akory izay no lasa sehatra mandeha ho azy 100% voalohany ahafahan'ny fiaraha-miasa marika-influencer ao amin'ny Snapchat.
Ny tsena dia manolotra maodely fampahalalam-baovao amin'ny haino aman-jery sosialy miorina amin'ny democratization ny marika sy ny fiaraha-miasa influencer. Misokatra ho an'ireo mpampiasa media sosialy rehetra ny hisoratra anarana ary manomboka mahazo tombony amin'ny hetsiky ny media sosialy. Ny marika, masoivoho ary orinasa madinidinika sy antonony dia afaka manao fampielezan-kevitra nefa tsy mila teti-bola farafahakeliny.
Momba ny SocialPubli
Ny SocialPubli.com dia mampifandray marika amina influencer 12,500 mahery avy amin'ny firenena 20+ manohana ny fampielezana dokambarotra media sosialy manerana ny Instagram, Twitter, Youtube, bilaogy ary ankehitriny Snapchat.
Ireo mpampita dia azo zaraina amin'ny alalàn'ny fepetra 25, ao anatin'izany ny safidy kendrena amin'ny toerana, miralenta, faritra mahaliana, taona, isan'ny mpanaraka sy ny hafa.
Tags: marketing marketingtsenan'ny influencersnapchatinfluencer snapchatpubliu socialsocialpublimaninona no ampidirina snapchat
Cloudwords: Global Marketing hiteraka fangatahana sy hitomboan'ny fitomboana